भरतराज पन्त Bharat Raj Panta
कमल दीक्षितले लेखेका थिए 'भरतराज पन्तको हृदय सफा थियो । मनमा एउटा कुरा, मुखमा अर्को कुरा गर्ने उनको बानी थिएन । त्यसैले होला उनले एकपटक मलाई, 'पेटमा एउटा कुरो मुखमा अर्को कुरो राख्न कपटी भनी छाँसेका थिए ।'
पन्त खरो हुने ठाँउमा खरो थिए र नरम हुने ठाँउमा नरम थिए । उनी छिटै रिसाउँथे र छिटै खुसाउँथे, उनी न्याय पनि गर्थे र अन्याय पनि खप्न सक्तैन थिए । उनी जस्तो लेख्थे त्यस्तै बोल्थे । त्यसैले नेपाली काव्य फाँटमा उनले शिर्षस्थ आसन जमाएका थिए । वास्तवमा उनी यस फाँटका अद्वितीय नै थिए । उनी जे देख्थे त्यही लेख्थे । लेख्तालेख्तै उनी आफ्नो मनको चुर्ना झारेरै लेख्थेः
जालीको करङै भाँच
लोभीको रगतै झिक
असत्तीलाई सुलैले रोपेर
गरिदेउ ठिक ।
पन्तको पन्ध्र वर्ष पुग्दानपुग्दै गोपालराज पाण्डे र पूर्र्णोन्दूप्रियाकी छोरी चित्रकुमारी पाण्डेसँग विवाह भयो । यिनको बिहेको भोलिपल्ट नै यिनका बुवालाई हटात ज्वरो आयो र त्यसको छ दिनमा उनी स्वर्गीय भए । त्यसपछि पन्तको अत्यन्तै दुक्खको दिनचर्या आरम्भ भयो । एकातिर पतिपत्नी माझ दिनहुँको कलह र अर्को तिर दुखद आर्थिक अवस्थाले डाम्न थालेपछि उनी विछिप्त हुँदै गए ।
पन्तकी श्रीमती रूपकी राम्री थिइँन् र उनी तरुनी पनि हुँदै आइन् । त्यसैले उनको श्रीमतीप्रतिको प्रेम, वासना र कामुकता पनि बढ्दै गयो । तर बराबर लोग्नेस्वास्नीको झैंझगडाले त्याहाँ आगो बलिरहने पनि गथ्र्यो । अनि अनमेलमा नै भए तापनि यी दम्पतिबाट दिनेश र रमेश अनि कल्पना र मुना गरी ४ जना छोराछोरी जन्मे । त्यसपछि आर्थिक अवस्थाले त्यो परिवार झनसारो मरणसन्नै भयो । त्यही तापसमेत जोडिएपछि उनकी पत्नी झनै झोक्राउन थालिन्, अर्ध चेतनामा बोल्न थालिन र लोग्नेको वदनाममा टोलछिमेक थर्काउन थालिन् । अन्ततः उनी विछिप्तमा नै रित्तिइन् ।
दयनीय आर्थिक अवस्थाले पन्तको मन चकानाचुर थियो । त्यस घडी कहींकतै पुराण वाचन गर्न बोलाए भने उनी दङ्ग पर्दै त्यता हानिन्थे । पूजा पुराणबाट प्राप्त आम्दानीबाट पनि उनी घर चलाउँथे । तर पनि घरको भत्केको चालाका कारण यता टाल्यो उत फाट्ने क्रमले उनी घरिघरि भौंतारिने गर्थेे । वास्तवमा त्यसबेला उनको घर एक प्रकारको दर्रि्री अवस्थामा आइपुगेको थियो । त्यसैताक त्यसै परिवेशले आत्तिएर उनको जेठा छोरा प्रायः मातेर हिंड्न थालेका थिए । धेरै बर्षम्मको यस रीतमा कुण्ठित भएर २४ वर्षीय उनको छोराले विष खाएरै भूगोलबाट आफूलाई हुत्याइदिए । यस बेहोराले पन्त मर्दै बाँच्तै गरे । यतिहुँदाहुँदै पनि उनलाई उनका कान्छो छोराको आड र भरोसा थियो । उनका कान्छो छोराले चाहिं एउटा थोत्रो घरलाई नयाँ पार्ने कसरत गरिरहेका थिए । उनी सरकारी जागिरदार भएकाले प्रायः देशविदेशको भ्रमणमा पनि गइबस्थे । तर पन्त त्यस छोराको पौरख खानबाट पनि एकाएक तैरिए । भनौं जेठा छोरा ंहिडेको वीस वर्षछि उनका कान्छा छोराले पनि पोखराको डेबिट फल्समा प्राण त्यागे । त्यसपछि उनी झनै आक्रान्त भए र उनले सुक्खको सास त्यति सारो फेर्न नै सकेनन् ।
सिंगारे पनि के भयो ?
बिगारे पनि के भयो ?
फुर्क्याए पनि के भयो ?
कुनै कुकुर आएर
तुर्क्याए पनि के भयो ?